Qindaa'inoota dimshaashaa galmeelee wardiitiif qindeessa.
Hidhoota yeroo fe'uu fooyyessi
Filatamaa deemsisuuf Furtuu Galchaa tuqi
Gara haalata gulaalaa deemuuf furtuu galchaa tuqi
Yeroo sarjaalee/tarreewwan haaraan saagaman wabiilee babal'isi
Fakkeenya: Yoo daangaan A1:B1 foormulaa keessatti wabeeffame fi sarjaa B booda sarjaa haaraa saagde, wabiin gara A1:C1 babal'ata. Yoo daangaan A1:B1 wabeeffamee fi tarreen haaraan tarree 1 jalatti saagame, wabiin hin babal'atu, haajaa maadheen tokko qofti kallattii gadiin jiruufuu.
Yoo tarreewwanii yookiin sarjaalee walakkaa bal'ina wabiilee keessatti saagde, wabiin yeroo hundaa ni babal'ata.
Filannoo mataduree sarjaa/tarree keessatti shooli
Tottolcha barruuf safara maxxansaa fayyadami
akka safarri maxxansaa argama maxxansuu fi tottolchuuf raawwatan argii irratti ifteessa. Yoo sanduuqni kun mallattaa'uu baate, teessumni maxxansaa irratti hin hirkanne mul'isa argii fi maxxansuuf fayyada.
Yeroo deetaa maxxansitu of eeggannoo walirratti barreessuu mul'isi
Title is: Dimshaasha